मुलासँग यी चीज झुकिएर पनि नमिसाउनुहोस !
मुलाको साग र मुलालाई आलु लगायत अन्य तरकारीसँग मिसाएर पकाइन्छ। तर तपाईलाई शायद यो थाहा छैन होला कि केही तरकारीसँग मुला मिसाएर पकाई खानु स्वास्थ्यको लागि हानि’कारक हुन् सक्छ। यी चीजहरु जुनसँग मुला खानु हुँदैन।
१.करेला : यदि तपाई मुला र करेला एकसाथ खाँदै हुनुहुन्छ भने होशि’यार रहनुस्। यो तपाईको स्वास्थ्यको लागि ख’तरनाक हुन् सक्छ। करेला र मुलामा पाइने प्राकृतिक त’त्वहरु एकापसमा प्रतिक्रिया गरी तपाईको स्वास्थ्य बि’गार्न सक्छ। यी दुईलाई एकसाथ सेवन गर्दा तपाईमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या हुन् सक्छ र साथै मु’टुको लागि पनि यी घा’तक हुन्छ।
साव|धानी – यी दुईलाई हरसम्भव सँगै नखानुहोला। यदि तपाई यी दुई खान चाहनुहुन्छ भने एक दिनको अन्तरा’लमा अवश्य खान सक्नुहुन्छ।
२. सुन्तला : मुलासँग सुन्तला कदापि सेवन नगर्नुहोला। मुला र सुन्तला एकसाथ खाँदा तपाईको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दछ। यी दुईको मेल तपाईको स्वास्थ्यको लागि विषसमान हुन्छ। यी दुईको मेलले तपाईमा पेटसम्बन्धी रोग, पाचन प्रणालीमा खरा’बी ल्याउनुको साथै अन्य रो’गहरुको पनि जन्म दिन्छ।
सावधानी – यी दुईमध्ये कुनै एक चीज बिहान सेवन गर्नुहोला र अर्को चीज बेलुका खानुहोला। दुवै खाने समयबीच लामो अन्तराल हुनुपर्दछ।
२०७७ फाल्गुन ४, मंगलवार ०८:०२ गते 1 Minute 1039 Views